संगीतमा पनि चन्द्र भण्डारीको छुट्टै बिरासत - Purwanchal Daily
६ असार २०७७, शनिबार ११:३७ मा प्रकाशित
संगीतले समाज रुपान्तरणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । ठूलाठूला क्रान्ति सफल बनाउन पनि संगीतको सहारा लिइएको छ । नेपालमा भएका राजनीतिक घटना परिघटनामा पनि संगीतको सहारा लिएका दृष्टान्त छन् । झापाली स्रष्टा चन्द्र भण्डारीको “अन्तिम विजय हाम्रै हो” राजनीतिक परिर्वतनका लागि कुनै समय चर्चाको शिखरमा थियो । जुन गीत बामपन्थी आन्दोलनबाट समाज रुपान्तरणका लागि सहयोगी भयो ।
गीत संगीतकै कारण समाज रुपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिएका भण्डारी झापाको शान्तिनगरमा बुवा पद्मप्रसाद र आमा ललितादेवी भण्डारीको १५औं सन्तानको रुपमा जन्मिएका थिए । सानैबाट जिज्ञासु भण्डारी संगीतमा मात्र सीमित छैनन्, उनको समाज रुपान्तरणको अर्काे दबिलो पाटो हो पत्रकारिता । कान्छो सन्तानका रुपमा वि.स. २०१३ फागुन २२ गते साविक शान्तिनगर–९ मा जन्मिएका भण्डारी पत्रकारिता क्षेत्रका अग्रज व्यक्ति हुन् ।
२०२५ सालबाट झापाबाट प्रकाशित सूर्याेदय, आलोक लगायतका पत्रपत्रिकामा छिटफुट रुपमा लेखरचना प्रकाशन गर्दै पत्रकारिताको आरम्भ गरेका भण्डारीले २०३५ सालदेखि काठमाडौंबाट प्रकाशित मातृभूमि, नव सन्देश जस्ता पत्रिकामा काम गर्न थाले । २०४६ सालको परिवर्तन पछि नेपाल पत्रकार संघ स्थापना भएको र सो संघमा उनले सचिवको भूमिका निर्वाह गर्न भ्याए ।
२०५१ सालमा नेपाल पत्रकार महासंघका संस्थापक महासचिव समेत भएका पत्रकार भण्डारीले राजधानीमै बसेर पत्रकारिता गरे । उनले काठमाडौं बसाइको क्रममा प्रकाश साप्ताहिक, सारांश मासिक पत्रिकाको सम्पादन समेत गरेका थिए । झापाको युगज्ञान साप्ताहिकबाट पत्रकारितालाई निरन्तरता दिएका भण्डारी अहिले कञ्चनजंघा एफएमका प्रबन्ध निर्देशकको भूमिकामा छन् ।
मेची अञ्चलमै पहिलो विद्युतीय सञ्चार माध्यमको उदय गराएर छुट्टै छबि बनाउन सफल भण्डारीले विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट पनि समाज रुपान्तरणको काम गरिरहेका छन् । समाज सशक्तिकरण गराउन उनले खेलेको भूमिका प्रशंसनीय छ । आवाजविहीनको आवाज बनेर अहिले पनि आफूलाई समाज रुपान्तरणको अभियन्ताका रुपमा उभ्याएका छन् भण्डारीले ।
पत्रकारिता शुरु गर्नु अघि राजनीतिमा सक्रिय भएका भण्डारीले ९ वर्ष ८ महिना कारागारको जीवन बिताएका छन् । झापा जेलबाटै २०३१ सालमा एसएलसी दिएका भण्डारीले इतिहास र राजनीति शास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध सक्रिय रहेका भण्डारी राजनीतिक परिर्वतन नभएसम्म मुलुकको विकास हुन नसक्ने विचार राख्थे । सानै उमेरदेखि राजनीतिमा होमिँदा उनले थुप्रै कष्ठ व्यहोरेका छन् । पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै मुलुकमा प्रजातन्त्र पुनः स्थापनाका लागि भण्डारीले विद्यार्थी जीवनदेखि नै राजनीतिक संगठनलाई तीव्रता दिएका थिए । भण्डारीले तत्कालीन नेकपा एमालेको विभिन्न जिम्मेवारी सम्हाल्न समेत भ्याएका थिए । ‘झापा आन्दोलन’बाट प्रभावित भएका भण्डारीले २०४६ सालको परिर्वतनका लागि संघर्ष गर्दा पटक÷पटक जेल जानु परेको थियो । उनले झापा कारागारदेखि काठमाडौंको नख्खू जेल, सेन्टर जेलसम्मको कठोर जेल जीवन बिताएका छन् । अखिल छैंठौंको केन्द्रीय अध्यक्ष समेत भएका भण्डारीले २०५३ सालमा मेची नगरपालिकाको उपमेयरको जिम्मेवारी समेत सम्हालेका थिए ।
तत्कालीन झापा जिल्लाको कान्छो नगरपालिकाको रुपमा रहेको मेचीनगर नगरपालिकाको निर्वाचनमा उनले सर्वाधिक मत प्राप्त गर्दै उपमेयरको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । उपमेयरकै अवस्थामा उनले २०५८ मा रेडियो सञ्चालन गरेका थिए । कञ्चनजंघा एफएम रेडियो अहिले पूर्वकै सर्वाधिक लोकप्रिय र जनप्रिय विद्युतीय सञ्चारमाध्यमको रुपमा स्थापित छ । रेडियो कार्यक्रम उत्पादन र प्रशारणमा निक्कै अब्बल देखिएका भण्डारीले अहिले पनि महिनामा ३५ वटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । भारत चीन लगायत ३८ देशको भ्रमण गरेका भण्डारी अहिले पनि साहित्य र पत्रकारिताको क्षेत्रमा सक्रिय छन् ।
लेखन कार्यमा समेत सक्रिय भण्डारीका अहिले चारवटा पुस्तक प्रकाशोन्मुख अवस्थामा रहेका छन् ।
राजनीतिसंगै संगीत सर्जकका रुपमा आफ्नो छवि उच्च राखेका भण्डारीले ३०० भन्दा बढी गीत संगीतको रचना गरेका छन् भने तीन वटा एल्वम सार्वजनिक गरेका छन् । गीत संगीतकै माध्यमबाट समाजलाई जागरुक बनाउन सकिन्छ भन्ने धारणा राख्ने भण्डारी गाउँ÷गाउँमा पुगेर गीत संगीतको माध्यमबाट सचेतना फैलाउन सक्रिय रहन्छन् । “अन्तिम विजय हाम्रै हो ”भाग १,२ र ३ प्रकाशन गरेका भण्डारीका २६ वटा गीत अहिले पनि रेकर्डका लागि तयारी अवस्थामा छन् । वि.सं. २०४६ सालमा लीना भण्डारीसंग वैवाहिक जीवनमा बाँधिएका भण्डारीका दुई छोरा सुव्रत र प्रशान्त तथा एक छोरी आरती रहेकी छिन् ।
यसै वर्षको पूर्वाञ्चल दैनिक मदन ढकाल स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार २०७५ बाट पुरस्कृत भण्डारी देश तथा विदेशमा रहेका ५० भन्दा बढी संघसंस्थाबाट सम्मानित एवम् पुरस्कृत भएका छन् ।
राष्ट्र राष्ट्रियता र आफ्नो सार्वभौम अधिकारका लागि कसैसंग कुनै प्रकारको सम्झौता नगर्ने भण्डारी केही समययता अस्वस्थ छन् । उनको गत आइतवार राति टाउकोको शल्यक्रिया गरिएको छ । बिर्तामोडस्थित बिर्ता सिटी अस्पतालमा भण्डारीको शल्यक्रिया गरिएको हो । मस्तिष्कको नशामा रगत जमेपछि भण्डारीको शल्यक्रिया गरिएको थियो । न्यूरो सर्जन डा. चन्द्रप्रकाश लिम्बूसहितको टोलीले गरेको शल्यक्रिया सफल भएपछि भण्डारीको स्वास्थ्य अवस्था सुधारोन्मुख छ । श्रीअन्तु प्रकाशन प्रालि तथा पूर्वाञ्चल दैनिक परिवार पत्रकार भण्डारीको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछ ।
प्रस्तुतिः सुरेन्द्र भण्डारी
Previous articleद्रोणाचायको स्मृतिमा : जसले गरे भारतीय थिचो मिचोको कडा विरोध
Next articleनिजी वनमा किसानको आकर्षण